အခက်ကြုံနေသော လူငယ်များကို ကူညီပေးခြင်း (မတ် ၂၀၀၇) ကျွန်မဟာ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆဲလ်ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုပုံတွေအကြောင်း အတော်များများ ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ဆိုက်အမျိုးမျိုးပေါ်က သူစိမ်းတွေနဲ့ ကျွန်မဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ မကြာခင်မှာပဲ အဲဒီမကောင်းတဲ့ အပေါင်းအဖော်တွေဆင်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်ထဲ ကျွန်မရောက်သွားတယ်။ ချက်ချင်းပဲ ကျွန်မရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဟာ စပြီးအားနည်းလာတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲက အတော်များများနဲ့လည်း လူချင်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ အဲဒါက အကျင့်ယိုယွင်းစေခဲ့တဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းစရာပဲ။ ကျွန်မခံစားနေရတဲ့ နာကျင်မှုမျိုး တခြားသူတွေ မခံစားရအောင် ဒီဆောင်းပါးက ကူညီပေးပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေ၊ ပြန်ပြန်ပေါ်လာတဲ့ အတိတ်ပုံရိပ်တွေကြောင့် နေ့တိုင်း ခံရခက်ပေမဲ့ စာတန်ကို ကျွန်မ ကြံ့ကြံ့ခံတွန်းလှန် နေပါတယ်။
ဘီ. အာရ်.၊ အမေရိကန်
ငါဘာကြောင့် မူးမေ့သွားတာလဲ (ဧပြီ ၂၀၀၇) ကျွန်မတစ်ယောက်ပဲ မူးမေ့တတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရလို့ အားရှိသွားတယ်။ ဒီဆောင်းပါးက ယေဟောဝါ ကျွန်မနဲ့ တိုက်ရိုက်စကားပြောနေသလို ခံစားရစေတယ်၊ “မင်းဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ငါမြင်ပါတယ်။ ဒီမှာ မင်းအတွက် အားရှိစရာစကားတွေ ဖော်ပြပေးထားတယ်” လို့ ပြောနေသလိုပဲ။
အီး. အာရ်.၊ မာဒါဂါစကာ
အနုပညာထက် ပိုတည်မြဲသောအရာ (ဧပြီ ၂၀၀၇) ဒီဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးတင်စကား ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ခြောက်နှစ်လုံးလုံး အောင်မြင်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံစတူဒီယိုနှစ်ခုကို ကျွန်မ ကြီးကြပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ဖော်ပြခွင့်ရလို့ အဲဒီအလုပ်ကို ကျွန်မ နှစ်သက်မြတ်နိုးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်မှာ အောင်မြင်မှုတွေရပြီး ဂုဏ်သတင်းမွှေးလာတာနဲ့အမျှ ယေဟောဝါရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာ ကျဆင်းနေသလိုမျိုး ကျွန်မ ခံစားလာရတယ်။ အနုပညာလုပ်ငန်းမှာ အာရုံနစ်နေလို့ တခြားအရာတွေအတွက် အချိန်မရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ တစ်ခုခု ပြောင်းလဲဖို့လိုပြီဆိုတာ ကျွန်မသိလိုက်ရတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မ အလုပ်ကထွက်လိုက်ပြီး ဘုရားသခင့်အမှုဆောင်ခြင်းမှာ ပိုပြီးပါဝင်လာခဲ့တယ်။ ဓာတ်ပုံ လုပ်ငန်းကနေရရှိတဲ့ ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုနဲ့ ရွှင်လန်းမှုတွေက ခရစ်ယာန်ဓမ္မအမှုလုပ်ငန်းကနေရရှိတဲ့ ရွှင်လန်းမှုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူး။
အေ. ပီ.၊ အမေရိကန်
လူငယ်များအမေး . . . ဒီလူဟာ ငါနဲ့သင့်တော်ပါ့မလား (မေ ၂၀၀၇) မကြာသေးခင်က ကျွန်မနဲ့လိုက်ဖက်မယ်လို့ထင်ရတဲ့သူကို ကျွန်မ စွဲလမ်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆောင်းပါးကိုလည်းဖတ်ပြီးရော ကျွန်မနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အရည်အချင်းတွေဟာ တကယ်အရေးမပါတဲ့ အရည်အချင်းတွေဖြစ်နေတာကို သိမြင်လိုက်ရတယ်။ ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ တခြားသူတွေအပေါ် အိမ်ထောင်ဖက်လောင်းရဲ့ဆက်ဆံပုံက ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မသဘောပေါက်အောင် ဒီဆောင်းပါးက ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့လို လူငယ်တွေကို ကာကွယ်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ ဒီလိုဆောင်းပါးမျိုးတွေအတွက် ယေဟောဝါကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
အီး. ပီ.၊ အမေရိကန်
အရှေ့တီမောနိုင်ငံသားများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (မေ ၂၀၀၇ [အင်္ဂလိပ်]) ကျွန်မ ဒီဆောင်းပါးကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှုခဲ့တယ်။ အဲဒီနိုင်ငံမှာ အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့ သတင်းကနေ ထုတ်လွှင့်တဲ့အချိန်မှာပဲ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကို ဦးဆုံးကြားသိလိုက်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး အရှေ့တီမောနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်လိုနေကြသလဲ၊ အဲဒီက ယေဟောဝါသက်သေတွေရဲ့ သက်သေခံခြင်းလုပ်ငန်း ဘယ်လိုထိခိုက်နေသလဲဆိုတာတွေကို ကျွန်မစိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အခြေအနေတွေကို အရှုံးမပေးဘဲ အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် ဆက်လက်ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်သွားကြတဲ့ အဲဒီနိုင်ငံကလူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ကျွန်မ အံ့ဩမိတယ်။ အရှေ့တီမောနိုင်ငံသားတွေရဲ့ လွယ်လွယ်နဲ့ အလျှော့မပေးတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်၊ ဂျေးကပ်ဘ်နဲ့ သူ့မိသားစုရဲ့ အပူအပင်ကင်းတဲ့အပြုံးတွေကို ကျွန်မ အမှတ်ရနေမှာပါ။
ဝိုင်. အမ်.၊ ဂျပန်
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ နိုးလော့! မတ် ၂၀၀၈